Dowladda Qatar oo 67 Milyan ugacan gelisay RW Kheyre & Shirkad Cusub oo la wareegeysa Kheyraadka. – Xeernews24
Dowladda Qatar oo 67 Milyan ugacan gelisay RW Kheyre & Shirkad Cusub oo la wareegeysa Kheyraadka.
17. Mai 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka naga soo gaaraya magaaladda Doha ee caasimada dalka Qatar ayaa sheegaya in halkaas ay heshiis ku gaadheen shirkado gaar loo leeyahay iyo maamul goboleedyada.
Heshiiskan oo ay goob joog ka ahaayeen wasiiro ka socda maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu saxiixay in shirkad laga leeyahay dalkaas la siiyay shatiga kaluumeysiga Soomaaliya.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhawaan booqasho ku tagay dalka Qadar halkaas oo uu uga qeybgalay shir ka dhacay, sidoo kalana wuxuu ujeedka ugu weyn ahaa siddi dowladda Qadar loogu saxiixi lahaa heshiiska bixinta shatiyada kalluumeysiga ee xeebaha Soomaaliya.
Xogta la helayo ayaa sheegaya in Ra’isulwasaare Kheyre uu shirkadaas laga leeyahay Qatar siiyay shatiga kaluumeysiga Xeebaha Soomaaliya, Qatar ayaana bixin doonta qarash aad ubadan .
Warka ayaa intaas ku daraya in Ra’isulwasaaraha iyo dowladda Qadar ay ku heshiiyey inay Qadar bixiso lacag gaadheyso ilaa 67 Malyan oo Dollarka Mareekanka ah, halka dowladda Soomaaliya ay ogolaatay in dowladda Qadar u saxiixdo heshiiska shatiyada kalluumeysiga ee xeebaha Soomaaliya.
Sidoo kale, Dowladda Qadar ayaa la filayaa inay dhawaan bixiso adduun lacageedka aan kor kusoo sheegnay, sidoo kalana waxaa jiro warar is khilaafsan oo kasoo baxo saxiixa dowladda ee heshiiskaas, waxayna wararka qaar sheegayaan inay hor marisay saxiixa heshiiska halka dowladda Qadar ay dhawaan bixin doonto lacagtaas, inkastoo warar kale ay sheegayaan in saxiixa iyo lacagta ay isku mar dhici doonaan.
Warar xili hore la helay ayaa sheegaya in saaxiibada madaxweyne Farmaajo oo uu kamid yahay Fahad Yaasiin uu kaalin weyn ku leeyahay in heshiiskaas uu dhaqan galo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/05/Kheyre-2-1-1.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-17 17:53:152017-05-17 17:53:15Dowladda Qatar oo 67 Milyan ugacan gelisay RW Kheyre & Shirkad Cusub oo la wareegeysa Kheyraadka.
Tacsi Tiiraanyo leh 40 Sanno ka dib Djibouti iyo Maanta iyo Aragtida Sheekh Bashiir